Intergenerational budlelwane nabanye kwi-Persia
Xa visitor ukuba Persia kuqala ubona ngonyaka- old umntu nge amashumi amabini-yeminyaka ubudala Filipina babe shocked. Ngexesha lo ngumzekelo extreme umzekelo, izakuba surprise abo visitors ukuba nokufumanisa ukuba oku intergenerational ezimbalwa wenziwe watshata iminyaka emine. Ukuba thina khangela emva kunye kwayena lo ezimbalwa anesithandathu eminyaka ukususela ngoku, baya kuba sifuna ukubhiyozela zabo ishumi-wedding isikhumbuzo. Ukuba ingxamele kakhulu ekuthatheni i-avareji ubude a umtshato phakathi kwabantu efanayo ubudala kwaye kanti ubudala hypocrisy? ikhona kwi-ezininzi societies. Kubalulekile nzima ukuba beka inani kwi avareji ubudala isithuba, kodwa oku umbhali kwizifundo a nje umntu kwi-Persia apho guests baba ngokukodwa intergenerational couples. I-avareji ubudala ngamnye indoda nomfazi lowo utshate naye wayesele amathandathu eminyaka. I-avareji neminyaka engama – ibhinqa amaqabane wayesele amashumi amabini anesihlanu. I-ingqikelelo i-avareji ubude womtshato (okanye ukuphila ngokubambisana) wayesele emihlanu. Ukususela kweli sinako uqikelelo ukuba Omnye visitors ukuba umntu waba i-i-american umntu owaye kuphela amashumi amathathu ubudala. Yena commented ukuba abantu abadala husbands ingaba zithe ukudlala cribbage e yabalawuli ke, umbindi kokuba babe sele kwi-KWETHU. Wathi waba amazed ukubona la madoda, residing kwi-Persia kunye kakhulu younger abafazi, abahlala enkulu eliphetheyo. Abaninzi abavela kumazwe angaphandle amadoda basemazweni ekwindla zabo iminyaka kuba fathered abantwana kunye Filipina beauties abakhoyo kwakhona kwi-springtime wobomi. Abantwana ezi budlelwane nabanye ngabo highly valued kwi-Philippine society. Oko wenziwe wathi kukho eliphezulu isenzo sempumelelo ukuba ubawo uya kudlula phambi kokuba umntwana reaches adulthood. Ngexesha ukuze zibe yinyani, kukho lokukhula isenzo sempumelelo ukuba efanayo-age umtshato ayisayi yokugqibela de umntwana matures. Abanye young ‘zooyise’ musa nkqu hlala de umntwana ngu kuzalwa kwaye umntwana inkxaso ayikho phezulu ngomhla wabo ephambili. Abantwana omnye izizathu kutheni ulutsha ladies ikhethe kakhulu mature abantu. Asingabo bonke mature abantu nokutya kwabantwana. Ezona ngokufanayo isizathu yi vasectomy phambi kwexesha ebomini. Iingxaki ezifana oku zithe isonjululwe yi-vasectomy reversal, artificial insemination, umntwana ongamzalanga abe ngowakho, okanye ingxowa-a elonyuliweyo abo sele ingaba abantwana. Abanye Eli-isithuba dating yi legitimate indlela ukufumana ezinzima budlelwane. Ingaba younger abafazi bamba isibheno kuwe? Ingaba uzilungiselele ukwaba kunye ukumona? Ukuba impendulo yakho ngu-ewe bobabini imibuzo, ngoko ke kufuneka uzame intergenerational dating. Ikomishini inkcubeko rhoqo ibonisa ubudala ukumona. Kukho prevailing attitude ukuba ubudala abantu kufuneka uthathe umhlala phantsi phambi kwexesha ukuba vumelani young kuba imisebenzi yabo. Ubudala abantu kufuneka ngalo yabalawuli umbindi ukudlala cribbage.
I-grown abantwana ukususela phezu – yomntu edlulileyo budlelwane nabanye rhoqo bacinga ukuba daddy ke umsebenzi ngoku kukuba beka phantsi jikelele kwaye kuba zabo ukhuseleko net, ngeli xesha ukujonga emva grandkids xa wabuza. Zonke ezi zi worthwhile pursuits kodwa xa i-ko – umntu? sele lezempilo kwaye youthful attitude akukho semthethweni isizathu sokuba abe ayikwazi ukuqala kwakhona kunye umfana iqabane lakho.
ngaba kuza kufuneka ibandakanye ukumona
Abanye abantu bacinge ukuba ngabo lokuqala ukuya phakamisa:”ukuba yakho Dad.”. Abanye abantu bamele genuinely ukucela ulwazi malunga yintoni yenza.
Thatha ixesha educate abo bantu
Kwabanye, eyona mpendulo rhoqo ukuze ungamhoyi i-fool okanye ncuma kwaye phakamisa lowo okanye yena kuba mnandi mini. Akuvumelekanga rhoqo kunokwenzeka ukuba lahla kwabo. Abanye ziyatha uza kufumana ilungelo kwingxelo yakho ubuso kamatshini ukwazi indlela endala yakho girlfriend ngu kwaye indlela endala ufuna. Ukuba awukwazi bite yakho lip kwaye vumelani oko umgca uza kuba ezininzi usamuel ukumelana kwiminyaka edlulileyo. Zama ukufumana loluntu amaqela njenge-minded abantu ukuba vent kunye kwaye kuba laugh malunga nayo. Kukho amaxesha amaninzi ebomini xa i-ubudala ubani”. kuya kwenzeka okokuba”kwaye sele amava ukwazi xa kukho into ayisayi kusebenza. A iya rhoqo khangela oku njengokuba ke thabatha kwaye unwilling ukuzama into entsha. Kubalulekile ukufumana isempilweni ungqinelwano ka-xa vumelani youthful iqabane lakho yakhe yenza eyakho iimpazamo kwaye xa ukwamkela ukuba ubudala kwaye wiser iqabane lakho kusenokwenzeka ekunene. Ngesondo appetites uza differ kunye ubudala. Ethubeni uza qaphela ukuba younger ubani stronger ngesondo drive kunokuba amadala omnye. Kukho inyaniso kusithiwa”ukusetyenziswa kwayo okanye kuphulukana nayo ke”. Aging abantu kuba bamfumana ukuba ngesondo unje naliphi na basebenzise, xa nigcina ezisebenzayo kufuneka igcine nako ukugcina ngokwenza oko. Pharmaceutical iinkampani kufuneka linike nathi kunye bale mihla nokulawulwa kwamayeza namachiza njenge Viagra kwaye kukho ngesondo izinto zokudlala ukuba zingasetyenziswa ngabo kufuneka ngakumbi uncedo. Kubalulekile ukuba i-ubudala umntu ukuba benze ngokwakhe yakhe elonyuliweyo ke yesitalato pleasures. Ukuba lowo uphumelele khange, yena abe fumana umntu lowo uza.
Kuya kubakho usapho koxinzelelo ibandakanye
Kwiziganeko eziliqela, usapho a Filipina iya kuba supportive i intergenerational budlelwane. Ngumsebenzi langaphandle umntu ke usapho abo baya ukwenza iingxaki. Iintsapho ezininzi kuba disowned abavela kumazwe angaphandle amadoda abo bakhetha yiya Persia ukuba ube kunye a younger umfazi. Grown abantwana suspect omtsha, umfazi uzama ukwenza labo. Aging abazali suspect zabo unyana wakhe wesibini lwabantwana abancinane. Abakhuluwa ingaba upset ngenxa yokuba abafazi babo asoloko uthetha malunga nale ‘perverted’ budlelwane. Kubalulekile into kufuneka ilungise ngokwakho ukuba ibandakanye phambi kokungenisa i-intergenerational budlelwane. Eli-isithuba dating yi legitimate indlela ukufumana ezinzima budlelwane. Ingaba younger abafazi bamba isibheno kuwe? Ingaba uzilungiselele ukwaba kunye ukumona
← Persia Ividiyo Lencoko
Kutheni ulutsha Filipino abafazi tshata ubudala mhlophe abantu. Filipino-Intanethi Dating →